I-2019 Indlela yokwenza isivinini se-testosterone se-enanthate ezinyathelo ze-6
/Blog/Gallery/I-2019 Indlela yokwenza isivinini se-testosterone se-enanthate ezinyathelo ze-6
Posted on 05 / 07 / 2019 by UDkt Patrick Young wabhala ku Gallery.
Konke mayelana ne-testosterone enanthate powder
I-1. Iyini i-testosterone enanthate
I-2. Yini i-Testosterone enanthate eyenza emzimbeni wakho
I-3. Indlela yokwenza i-Testosterone Enanthate isiqhwaga ngesinyathelo ngesinyathelo
I-4. I-Testosterone I-enanthate ikhefu ngesinyathelo ngesinyathelo
I-5. Qala i-homebrew yakho ye-steroid kusuka ku-Testosterone
Lesi sihloko sinikeza incazelo eningiliziwe yendlela ongayenza ngayo isiqhwaga se-testosterone enanthate. Iphinde ikhanyise izinzuzo ze-Testosterone Inanthate.
Kuyini ti-estosterone enanthate
Njengoba kunesidingo sokusika umzimba ngokwengeziwe, abantu bahlale bebheke okuthile okungabasiza ukuba bazuze inzuzo engaphezulu kunezinye. Isibonelo sengezela okunjalo yi-testosterone enanthate engenye ye testosterone steroids esetshenziswa kakhulu. Kuyinto kokubili i-androgen futhi I-steroid ye-Anabolics.
Nakuba ivinjelwe ukusetshenziswa, iyaqhubeka ibe enye yezinto ezifunwa kakhulu nge-steroid ngabazimba bomzimba. Akusizuzi nje kuphela ukuzuzisa umzimba, kodwa futhi kuyasiza kulabo abasebenzisa ngezokwelapha emithini yokwelapha ye-testosterone, kulabo ababhekene nokuphindaphinda ngokobulili nokuphathwa kwe-hypogonadism.
Yini i-Testosterone enanthate eyenza emzimbeni wakho
I-Testosterone Inanthate iboniswe ukuthi iyasiza ekukhwaleni kwezicubu ezikhiqiza ukululama komzimba ngokushesha. Ngokwandisa ukukhiqizwa kwamaprotheni, kusiza izicubu zilulame ngisho nangemva kokusebenza kanzima ekwenzeni i-gym. Ngenxa yalokho, ungakwazi ukusebenza kanzima futhi ubone umphumela womsebenzi wakho ngaphandle.
Ngenkathi abantu abaningi bengase bazizwe sengathi bethatha ngokwanele, bengadli kakhulu futhi bengalahleki amafutha omzimba abafuna ukuwalahleka, I-testosterone i-Enanthate kuqinisekiswe ukuthi uyayenza ngokuphumelelayo. Okumangazayo ukuthi uma ungumakhi womzimba, ngeke ulahlekelwe isisindo sakho kodwa amafutha angabonakali awafihle.
Lokho kusho ukuthi uthola ukugcina imisipha yakho, futhi kangcono ukuthi uthole okuchazwe kabanzi. Amafutha omzimba amancane azokukwenza uhlale uhlelekile futhi uphile impilo ende.
Ukwanda kwe-muscle mass
Uma uyisakhiwo se-muscle, uzobonga ukuthi i-testosterone enanthate umphumela wokwakha umzimba uphelele. Kuyasiza eyodwa ngokukhuphula ukukhiqizwa kwamaseli obomvu emnothweni wethambo. I-testosterone enanthate ivimbela nomphumela we-cortisol, i-hormone esebenza ngokushaya imisipha ngakho kuholela ekulahlekelweni kwayo.
Ukuphakamisa izisindo ezinkulu, kufanele uzuze amandla amaningi. Esinye sezizathu eziningi abantu abazokwenza ngayo umzimba bazokwenza noma yini ukuze bathuthukise amandla abo ngoba kuhlotshaniswa nokuzuza okukhulu emasimini. I-testosterone enanthate ingenye yama-steroids amahle kakhulu azokusiza ukwakha amandla amaningi okukusiza ukuba uphakamise isisindo oye wasifisa ngaso sonke isikhathi.
Indlela yokwenza i-Testosterone Enanthate isiqhwaga ngesinyathelo ngesinyathelo
Yenza eyakho Isiqhwaga Testosterone Enanthate kungaba lula noma okunzima, indlela oyikhetha ngayo. Abantu abaningi bangakudikibala ngezesayensi eziningi kuwo, kodwa sizokwethula ngokulula. Nazi izidingo kanye nesinyathelo sesinyathelo ngesinyathelo sokuthi ungabhula kanjani i-Testosterone Enanthate;
I-Testosterone Inanthate powder: i-62.5 amagremu
Utshwala obunamafutha (BA): 5ml (2%)
I-benzyl benzoate (BB): 50 ml (20ml)
Amafutha atshisiwe: 148.13ml
Izigqoko eziyishumi Izigqoko ngasinye ziba ne-10 ml (Isethi yonke kufanele ibe ne-cap, isitoreji senjoloba, kanye ne-vial.)
Isihlungi se-22um Syringe
Isiyingi se-20mL / 60 ml ene-18-21 gauge inaliti.
I-3mL isringeni ene-18-21 gauge inaliti
I-Glass Rod ne-100mL Beaker
Izingcezu ezimbalwa zephepha
Isilinganiso se-digital (+ -0.1 noma i-0.01)
I-Testosterone I-enanthate ikhefu ngesinyathelo ngesinyathelo
Isinyathelo i-1: Gubungula i-testosterone enanthate powder.
Isinyathelo 2: Engeza i-powder, i-BA, ne-BB ku-beaker
Isinyathelo 3: Sishisa i-beaker emanzini okugeza
Isinyathelo i-4: Engeza amafutha aqoshiwe
Isinyathelo 5: Ukuhlunga
Isinyathelo i-6: Beka ama-caps ama-caps
Nazi izinyathelo eziningiliziwe mayelana nokuthi kufanele kwenziwe kanjani;
Isinyathelo i-1: Gubungula i-testosterone enanthate powder
Ukulinganisa I-testosterone i-Enanthate powder ukuqinisekisa ukuthi usebenzisa ubuningi obufanele okudingayo ukuze wenze isiqu sakho sasekhaya. Ukuze uthole isisindo esiqondile, thola iphepha elincane bese ulibeka esikalini.
Ukuze uqinisekise ukuthi awufaki isisindo sephepha uma ulinganisa i-powder, cindezela u-tare ukusetha isikali ku-zero. Manje ungangezela i-powder kancane ukuze ugweme ukubeka okuningi okungadingeka ukuthi uqhubeke ususa.
Ngezinye izikhathi i-powder ingase ibe nesisindo esincane kangangokuba ungadinga ukuyibuyisela kabusha ngaso sonke isikhathi uma udinga ukungeza okuthile. Indlela engcono kakhulu yokugadla kungukungeza i-powder encane bese ucindezela esikalini usebenzisa umunwe wakho bese uvumela inombolo ukuba iphinde iphinde iphinde. Uma usuqinisekile ukuthi ulinganisile kahle amagremu akho we-25, manje ulungile ukuya. Gwema i-powder ye-Testosterone Enanthate ukuze uqiniseke ukuthi usebenzisa ubuningi obufanele okudingeka uwenze ekhaya lakho
Beka i-powder esilinganiselwe ibe yi-beaker.
Engeza i-2ml ye-Benzyl Alcohol ne-2ml Benzyl Benzoate.
Umsebenzi oyinhloko wokwengeza i-Benzyl Alcohol ukuthi usebenze njenge-agent esebenzayo. Isebenza kahle ne-solvent ngakho-ke ukugcina wonke amafutha nama-powders endaweni eyodwa. I-Alcohol ye-Alcohol iphinde isetshenziswe kakhulu, kanti inzuzo ezayo nalokho ukuthi kusiza ekubeni nomjovo ongenamaphutha.
Lesi sinyathelo sinokuzikhethela, kodwa uma ufuna inqubo isebenze kahle, ke akufanele uyenqabe. Thola imbiza bese uyigcwalisa nge-intshi yamanzi. Beka emthonjeni wokushisa, isib. Isitofu bese uvumele ukushisa.
Thatha i-pan bese ubeka i-beaker kuyo. Beka i-pan ibe ngamasentimitha ambalwa wamanzi. Qaphela i-powder futhi ubuke njengoba idiliza ize ifike isondele. Isixazululo esicacile sisho ukuthi le nhlanganisela manje iyancibilika.
Konke lokhu kunomthelela ekuqothuleni i-powder ngokuphelele kwi-solvents. Hambisa esiteji esilandelayo uma kungekho powder ebonakalayo.
Lindela ukuthi i-concoction ipholile phansi kancane bese ufaka amafutha afakwe kuwo. Ungakwazi ukufudumala kancane ukwenza ukuhlunga kube lula.
Amafutha omvini wamagilebhisi ungumama wazo wonke amanye amafutha asebenza njengabathwali. Yini eyenza kube ngcono ukusetshenziswa kwabanye kunokuthi mncane futhi unesakhiwo sokuzibulala. Futhi, kusiza ukulungisa izicubu ezonakalisiwe futhi ukulinganisa konke okuphephile kuwe! Ngeke ukwazi ukuhlupheka ngenxa yokusabela okubangelwa ukwelashwa okubangelwa amafutha omvini.
Isinyathelo esilandelayo okufanele uyenze ukudweba isixazululo sibe yipiringi oyisebenzisayo ukuyihlunga nayo. Ungasebenzisa i-syringe eyodwa noma encane bese ukhetha ukuphinda inqubo izikhathi eziningi.
Sula isihlungi se-0.22um seringue kusuka kwiphakheji yayo bese ulungisa inaliti eluhlaza ohlangothini oluncane bese usebenza kwisirinji. Ukusebenzisa i-swab yotshwala, sula phezulu kwesibindi esinyumba bese ufaka inaliti eluhlaza kuyo. Beka inaliti enamathele kusihlungi se-syringe ku-vial.
Lesi sinyathelo yisinyathelo esibaluleke kakhulu, futhi wonke ama-steroids aqedile kumele ahambe ngawo. Kuyinto evamile ukuthi isihlungi singavinjelwa ngesikhathi senqubo yokuhlunga. Ngenxa yalokho, uzobona ukuthi inqubo ihamba kancane kakhulu. Ukuze ulwisane nalokhu, faka isihlungi ngenye entsha ukukusindisa ubuhlungu bokuthi ulinde ukulinda.
Kodwa-ke, udinga ukuqaphela ukuthi isikhathi esithathwe ukuhlunga isisombululo sincike kwi-steroid kanye mg / ml womkhiqizo.
Uma usuqedile ukuhlunga ku-vial oyinyumba, inqubo iphelele.
Sula isixazululo sakho usebenzisa ama-caps flip-off.
Qala i-homebrew yakho ye-steroid kusuka ku-Testosterone
Testosterone i-steroid yasekhaya yiyona engcono kakhulu ongayenza ngoba umzimba wakho uyazijwayele. Kukhiqizwa emzimbeni ngokwemvelo futhi kusize ukuba ikhule, ilungise futhi ikhule kahle.
Lapho amazinga e-testosterone ephansi, kunokwanda kwamafutha nesisindo. I-testosterone supplementation yindlela engcono kakhulu yokufinyelela ekusebenzeni kwezemidlalo, ukukhuthazela okungcono, kanye nemisipha enamandla. Uma uhlela ukuvuselela umzimba wakho, kufanele ucabange ukwenza isitifiketi sakho sasekhaya usebenzisa i-Testosterone.
Inkinga ezayo yokwenza i-homebrewed steroid yakho ukuthi ungathembeli ukuthi izokunikeza imiphumela oyifanele. Ngisho nangemva kokulandela iresiphi efanele, uzothola ukuthi awuqiniseki kakhulu ngalokho owakhiqizile. Abantu abaningi abakhiqiza i-steroid yabo bayisebenzisa njengendlela yokulinga nephutha.
Uma ungenalo amakhono okwanele e-laboratory, akufanele neze uhlanganyele kule nqubo ngoba kungaba yingozi kuwe. Njengoba kuboniswe kulesi sihloko udinga kuphela imishini eyisisekelo ye-laboratory kodwa ukulahlekelwa isinyathelo esincane kungaqeda ukunikeza izindaba ezibucayi ngokuyinhloko kusukela ohlelweni lokujova. Lokhu kungenxa yokuthi ukulungiselela i-steroid yasekhaya kufanele ibe yinyumba ngaphambi kokuyijova. Kusho ukuthi kufanele uqaphele ngesikhathi sokulungiselela. Ukungenaso iso elihle kakhulu kungenza uzilimaze ngenkathi uzama ukukhiqiza okuthile ongase uthenge ngomumo.
Ukuze uqiniseke ukuthi uthatha isilinganiso se-Testosterone Enanthate nekhwalithi, kufanele ucabange ukutshala imali ku-steroid esevele ikhiqiziwe. Ngeke kube kuphela ephephile kuwe kodwa futhi ukhululeke kakhulu ukusebenzisa.
Ukukhiqiza i-steroids yasekhaya yakho kuyasiza ngoba kusiza ekufezeni izinzuzo zakho ezinhlelweni zokuzivocavoca ngaphandle kokuthi ufune ukungena ngokujulile emaphaketheni akho. Kungase futhi inikeze enye indlela engcono ye-steroid yekhwalithi ephansi eshukumisa abahlinzeki ukuhlinzeka emakethe. Ngomdwebo we-Testosterone we-homebrew umhlabeleli ohlinzekwe ngenhla, uyakwazi ukukhiqiza umkhiqizo ophezulu.
I-Anabolic Steroids futhi Ukwenza, uProfesa Frank, ikhasi 1-42
I-Testosterone: Isenzo-Ukuntuleka-Ukufakwa esikhundleni, u-Eberhard Njeschlag, uHermann M. Behre, ikhasi 330-339
I-TTFB; I-Testosterone, Ingqikithi, i-Bio, Free, S. Septemba 19, i-2017
I-MAGL inhibitor ne-FAAH Inhibitor: JW-642 & OL-135 & PF-750
Indlela Yokukhetha I-Steroids Powder Suppliers ku-12 Izinyathelo Indlela Yokusebenzisa I-Trenbololone Recipe Yokuxuba I-Trenbolone Inanthate Powder 2019